Na nke a "mbanye anataghị ikike" i nwere ike sọrọ-SIM gị Samsung Galaxy S7 | Akụkọ akụrụngwa
A «mbanye anataghị ikike» i nwere ike inwe sọrọ-SIM gị Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 na Galaxy 7 Edge bụ ngwaọrụ abụọ kachasị egbutu na ahịa. Agbanyeghị, na-elekwasị anya na ndị na-ege ntị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, anyị na-achọpụta na ọ nweghị ụdị abụọ-SIM, ihe mara mma n'etiti ngwaọrụ ndị si China dịka ọmụmaatụ. Mana ihe niile nwere ihe ngwọta na ndụ a (ma e wezụga ọnwụ), nke ahụ bụkwa Na obere ngwa, ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkpọ ya, anyị ga-enweta sistemụ SIM na Samsung Galaxy S7 anyị. na a ngwa ngwa, mfe na n'elu ihe niile ọnụ ala ụzọ. Anyị na-agwa gị ihe usoro SIM abụọ nke Samsung Galaxy S7 mejupụtara.
Ngwaọrụ a enweghị ụdị sọftụwia ọ bụla, anyị na-echeta na gam akporo bụ sistemụ dabara nke ọma na sistemụ SIM abụọ ma kwadebe ya. Iji nweta usoro a, anyị nwere ike ịga webụsaịtị anyị ga-ahapụ na ngwụcha post, mana cheta na anyị ga-erite uru na ya anyị ga-achọ okwu nchekwa maka Galaxy S7 anyị, ma ọ bụ na anyị agaghị enwe ike iji ya nke ọma. Simore, otu ndị na-eme ngwa a, hapụrụ anyị vidiyo dị egwu ka anyị wee hụ etu o si arụ ọrụ na otu anyị nwere ike isi rite uru na ya. Ọchịchọ ịmata ihe dị ka nke ọma dị ka nsogbu, ebe ọ bụ na anyị enwebeghị ike ịnweta ozi gbasara ma ọ naghị arụ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo ndị ọzọ.
Anyị na-echetakwa na ị ga-achọ Samsung Galaxy S7 gị na ajụjụ iji nwere onwe gị, ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na ụlọ ọrụ ekwentị (ihe na-anaghị eme na Spen ma na mba ndị dịka United States ma ọ bụ United Kingdom). Teknụzụ ọgụgụ kaadị SIM a mara ezigbo mma, mana ọ dịna-akwado site na GSM ka LTE-4G, ya mere anyị na-ewere ya dị ka ihe zuru oke. N'otu aka ahụ, enwere ike ịmegharị maka SIM, microSIM na sistemụ nanoSIM, iji kwado ndị ahịa. Ọ B IFR you na ị nwere ụdị SIM abụọ nke Galaxy S7 (nke dịkwa), ị nwere ike ịnwe SIM atọ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike buru oke ...
ORELỌ ụlọ ahịa SIM abụọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » A «mbanye anataghị ikike» i nwere ike inwe sọrọ-SIM gị Samsung Galaxy S7
ọnụahịa dị elu nke ekwentị maka ihe ha nwere ike ime ka ị daa na ọdịda dị mfe ma ọ bụ na mmiri ... Echere m na ụlọ ọrụ ga-eme ka ekwentị niile daa ihe akaebe na submersible na mkpuchi roba maka ịlaghachi. Ọ bụ ngwaọrụ anyị na - apụ apụ n’akpa anyị ma ọ nwere ike ịdakwasị anyị ... na nke ahụ bụ ọ bụrụ na ị nọrọ ezigbo euro ole na ole na ekwentị ahụ ... Otu enyi m zụtara otu sony nke ikpeazụ a z5 xperia na ọ bụ nke ugboro abụọ na ọ na-agbaji ihuenyo na otú oké ọnụ ndozi na-akwụ ụgwọ. Eziokwu bụ na ahụghị m ya afọ ojuju maka ịzụrụ ihe ruo mgbe m chere na m na-ahụ ya na-akwa ụta maka nzụta ahụ
Skinny ọ bụrụ na ị zụta ekwentị euro 700 ị ga-eme ihe niile enwere ike ka ọ ghara ịpụ n'aka gị ma ọ bụrụ na ị gaghị agbanwe ihuenyo 2 ugboro, enwere mkpuchi na ndị nchebe….
Na anyi na-ara ara kwa ubochi
Intel na-azọrọ USB-c ga-eji dochie ụda isi okwu
Xiaomi hụrụ na ahịa ya dara na 2016